Mugabe eyes 'grand' inauguration after contested vote - Yahoo Sport New Zealand
Mugabe eyes 'grand' inauguration after contested voteBy by Fanuel Jongwe | Agence-France Presse – Thu, Aug 22, 2013 9:04 PM NZST
Related ContentView PhotoA vendor sells flags on a street in Harare on August 21, 2013, the eve of President …View PhotoMourners at the August 14 funeral of Morgan Tsvangirai supporter Rebecca Mafikeni, …View PhotoZimbabwe's newly re-elected President Robert Mugabe speaks at a SADC summit in Lilongwe, …
A vendor sells flags on a street in Harare on August 21, 2013, the eve of President Mugabe's inauguration ceremony. Zimbabwe's veteran leader Robert Mugabe will host a massive stadium-filling presidential inauguration to usher in a new five year term Thursday, despite expected limited attendance by foreign leaders and a boycott by his election rival.
Mourners at the August 14 funeral of Morgan Tsvangirai supporter Rebecca Mafikeni, who died in custody. Zimbabwean opposition leader Tsvangirai will not attend President Robert Mugabe's inauguration Thursday, aides said, insisting the vote which handed the 89-year-old another five-year term was rigged.
Zimbabwe's newly re-elected President Robert Mugabe speaks at a SADC summit in Lilongwe, on August 18, 2013. Veteran leader Mugabe will host a massive stadium-filling presidential inauguration to usher in a new five year term Thursday, despite expected limited attendance by foreign leaders and a boycott by his election rival.